Dare reDzimhosva Rotarisirwa Kupa Mutongo Waro paNyaya yaVaKonjana Chero Nguva
Gift Konjana and his lawyer Advocate Tererai Mafukidze
Dare repamusoro soro nhasi raisa parutivi mutongo waro panyaya yaVaGift Konjana veMDC avo vakakunda musarudzo yemumiriri weChegutu West muna 2018 asi vakatadza kupinda muparamende.
Izvi zvakaitika mushure mekunge Zimbabwe Electoral Commission (ZEC) yakanganisa kutaura zvakabuda musarudzo ndokudoma VaDexter Nduna veZanu PF saivo vakakunda.
VaKonjana vari kuda kuti dare iri rigadzirise nyaya iyi.
Vachitaura mudare nhasi, rimwe remagweta aVaKonjana, Advocate Tererai Mafukidze, vati dare repamusoro soro rinofanira kunzwa nyaya iyi sezvo pakatyorwa bumbiro remutemo pakaramba dare reSupreme Court kunzwa nyaya iyi.
Asi gweta reVaNduna, Advocate Tawanda Zhuwarara, vati Constitutional Court haitombofanira kunzwa nyaya iyi nekuti VaKonjana vakatadza kutevedza mitemo yezvesarudzo.
Mushure mekunzwa kubva kumagweta aVaKonjana naVaNduna vatongi vatatu vanoti Justice Paddington Gwarwe, Justice Anna Mary Gowora na Justice Ben Hlatshwayo vati vachizivisa mutongo wavo munguva inotevera yavasina kudoma.
Rimwe gweta raVaKonjana, VaMoses Nkomo, vati pane humbowo kubva kuZEC pachayo hunoratidza kuti VaNduna handivo vakawhina sarudzo iyi uye zvakakosha kuti kodzero dzevanhu vekuChegutu West nedzaVaKonjana dziremekedzwe.
VaKonjana vakakunda musarudzo dza2018, asi kusvika nhasi, havasi muparamende sezvo ZEC yakati VaNduna ndivo vakakunda.
Pasi pemutemo wesarudzo kana ZEC ikakanganisa kutaura zvinenge zvabuda musarudzo dare rinoona nezvesarudzo reElectoral Court, ndiro rinofanira kugadzirisa izvi.
Asi Electoral Court yakarasa nyaya yaVaKonjana ichiti vainge vasina kutevedza gwara rinodiwa pakukwidza nyaya yakadai kudare.
Dare reSupreme Court rakarambawo kunzwa chichemo chaVaKonjana richiti nguva inokodzera kuti nyaya yavo inzwikwe yainge yadarika vasati vaikiwdza kudare iri.
Asi VaNkomo vanoti vakaita zvese zvinodiwa pamutemo pakuisa nyaya iyi pamberi pematare eElectoral Court neSupreme Court.
Mune imwewo nyaya iri kumatare, dare ramajisitiriti rati richapa mutongo waro svondo rinouya pachikumbiro chemutungamiri weAlamamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, VaObert Masaraure, chekuti nyaya yavari kupomerwa yekuda kubvisa hurumende nechisimba iraswe.
VaMasaraure vakasungwa muna Ndira muna 2019 vachipomerwa mhosva yekuda kubvisa hurumende yaVaEmmerson Mnangagwa pachigaro nechisimba.
Mangwana dare ramajisitiriti richapawo mutongo waro panyaya yemutapi wenhau, Hopewell Chin’ono, yaari kuda kuti dare iri rirase nyaya yaari kupomera yekuti akaburitsa manyepo pandandemutandee rake reTwitter.
Nyaya iyi yakaraswa nedare reHigh Court mwedzi wapfuura asi muchuchusi mukuru wenyika, VaKumbirai Hodzi, vakapikisa mutongo uyu izvi zvadzosa nyaya iyi kumatare zvekare.